यी WIC फूडहरू प्रयोग गर्न नयाँ विचारहरू हेर्नुहोस् जेपीएमए, इंक
नयाँ विचारहरू हेर्नुहोस्
यी WIC फूड्स प्रयोग गरी!
मिक्स, कोट, स्वैप र माथि!
हरेक WIC भोजनमा स्वादिष्ट पोषण भूमिका छ।
किन डिब्बा माछा? तिनीहरूले एउटा उत्कृष्ट स्रोत प्रदान गर्छन्:
प्रोटिन, जसले ऊर्जा प्रदान गर्दछ र तपाईंको शरीरलाई हड्डिहरु, मांसपेशिहरु, कार्टिलेज, छाला, रगत, एंजाइमहरू र हार्मोनहरू निर्माण गर्दछ।
क्यालसियम (हड्डी-भित्र सामोन / सार्डिन्स बाट), जुन तपाईंको शरीरको निर्माण र बलियो हड्डियों कायम राख्छ
ओमेगा3फैटी एसिड, (डिब्बाबंद सामनबाट), जसले हृदय रोगलाई रोक्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको मनमा सुधार गर्न सक्छ।
राम्रो स्वास्थ्य को लागि डिब्बाबंद माछा हैक्स। माछा दिन को कुनै पनि समय को लागि एकदम कम लागत प्रोटीन विकल्प हो।
पास्तामा माछा पास्ता पास्ता खानाहरू वा क्यासरोलुहरू
तपाईंको टुना सलादको लागि सादा दही वा मासुश सेतो बीनको लागि मेयनेज स्वैप गर्नुहोस्
राम्रो बनावट को लागि कोट ट्यूना या सलाम अनाज र पैन तलना संग सैलून पट्टियों
आफ्नो डिमेलेटमा डिब्बाबंद सामन मिक्स गर्नुहोस्
छिटो लंचको लागि शीर्ष-गेहूं पिटा हार्मस र डिब्बाबंद सामनसँग।
. नाश्ता किन अनाज? तिनीहरूले एउटा उत्कृष्ट स्रोत प्रदान गर्छन्:
फलाम, जुन तपाईंको शरीरले रक्त खण्डहरू प्रयोग गर्दछ जुन तपाईंको फेफड़ोंबाट तपाइँको शरीरको अक्सिजन लिन्छ।
Folate / Folic एसिड, जो कोशिका विकास र विकासको साथ मद्दत गर्दछ।
फाइबर (सम्पूर्ण अनाज विकल्पहरूबाट), जसले तपाईंलाई नियमित रूपमा राख्न मद्दत गर्छ र खाना खाने पछि पूर्णतया महसुस गर्दछ। केही फाइबरले पनि रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर नियन्त्रण र हृदय रोगलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छ।
राम्रो स्वास्थ्य को लागि नाश्ता अनाज हैक्स। नाश्ता अनाज नाश्ता को बाहिर विभिन्न तरिका मा प्रयोग गर्न को लागि तपाईं स्वादिष्ट परिवार को भोजन मा मुद्रा को बचत गर्न मा मदद गर्न को लागि।
कुनै पनि नुस्खाको लागि ब्रेडक्रम्बको लागि कुचल अनाज स्वैप गर्नुहोस् जुन तिनीहरूको लागि कल।
महँगो croutons र सलाद टोपर्सहरूको लागि मौसमी मकई वा चावल फ्लेप स्वाप गर्नुहोस्।
कोट चिकन वा माछाले कुचल मकै वा चावल अनाज सँग माछा कुरियर कम वोसो ओवन त्रिएका परिवार मनपर्ने बनाउन।
मासु चल्ला, मकै, वा गेहूंको भित्तामा मासुबल, मासुलोफ, वा मासु पेटी व्यंजनहरू मासुको मिश्रण गर्नुहोस्।
मक्खन संग बज्छ वा पनीर संग छिराइएको कुचल अनाज संग शीर्ष डेसर्ट वा क्यासरल।
किन टोफू? टोफूले कम-मोटो स्रोत प्रदान गर्दछ:
क्यालसियम, जुन तपाईंको शरीरको निर्माण र बलियो हड्डियों कायम राख्छ
राम्रो स्वास्थ्य को लागि टोफू हैक्स। टोफू सजिलै संग अन्य सामाग्री को स्वाद लेन्छ यो एक नुस्खा मा मासु, अण्डा, या डेयरी को लागि एक महान प्रतिस्थापन बनाउन यदि तपाईं ल्याक्टोज सहन सक्दैन।
सुचारुहरूमा दहीको लागि आधा कपमा रेशिन टोफुलाई थप कम वोसो प्रोटीन थप्न स्वैप गर्नुहोस्।
मलाई क्रीम सूप व्यञ्जनहरु मा भारी क्रीम को लागि silken tofu स्वैप गर्नुहोस।
केही चिसो मुलायम टोफुले टेकोस, क्यासरोल, डम्पप्लिंग र अन्य व्यञ्जनहरूमा भुइँमा मासुमा मिलाएर मोटो कम गर्न र भोजन भन्दा बढि सर्भरहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
अण्डा, सिजनको लागि टुक्रा टुक्रा फर्म टोफू स्वैप गर्नुहोस् र स्वादिष्ट नाश्ता स्क्रैबल बनाउन कटा वेटीज थप गर्नुहोस्।
बेकिंग व्यंजनहरु मा प्रत्येक अंडा को लागि ¼ कप रेशम टोफू को बदलो।
बीन र दाल
किन सेतो र दाल? बीन्स र दाल एक कम मोटा स्रोत प्रदान गर्दछ:
फाइबर, जसले तपाईंलाई नियमित रूपमा राख्न मद्दत गर्छ र खाना खाने पछि पूर्णतया महसुस गर्दछ। केही फाइबरले पनि रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर नियन्त्रण र हृदय रोगलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छ।
फलोट / फोलिक एसिड, जो कोशिका विकास र विकासको साथ मद्दत गर्दछ।
राम्रो स्वास्थ्यको लागि बीन र लेन्टिल हैक। जब तिनीहरूले डिब्बा भन्दा पकाउन कुकिलो समय लिन्छन्, सूखे सेमसँग रुचाउँदा एक धनी स्वाद छ।
प्याकेज निर्देशन अनुसार सोया सेमहरू र त्यसपछि ढिलो कुकरमा रातमा पकाउनुहोस्।
सप्ताहांतमा ठूलो बर्तनको सूखे बीउ कुक गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई 1 क्वार्ट फ्रीजर थिममा सजिलै प्रयोगको हप्तामा स्थिर गर्नुहोस्।
के तपाईं सुकेको वा डिब्बाबंद सेमसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, उनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने बारे विचारहरू चलाउन सजिलो छ, यहाँ केही सेन्सरहरू छन् जुन सेमहरूसँग पकाउनको लागि स्वास्थ्य फाइदाहरूको आनन्द उठाउँछन्:
अतिरिक्त दाल, दाल, काली सेम, या गेडाबन्जो सेन्स संग अतिरिक्त प्रोटीन, स्वाद, र बनावट को लागि।
मासुयुक्त सेम मासुबल, मासुलोफ, वा बर्गरमा मसला थप व्यंजनहरू व्यंजनहरूबाट बाहिर निकाल्न र खानाको बनावट सुधार गर्न।
मेनेजियसका लागि मसाएको सेतो वा कालो बीन्स स्वाइप गर्नुहोस्।
किनारिका मक्खन किन? मूंगफली मक्खन प्रदान गर्दछ:
स्वस्थ वसा, जसले हृदय रोगलाई रोक्न मद्दत गर्दछ।
मूंगफली मक्खन राम्रो स्वास्थ्य को लागि हैक। मूंगफली मक्खन विभिन्न स्वादको साथ काम गर्दछ।
सुक्ती फल डुबेको लागि दही संग मिक्स गर्नुहोस्
चिकन र माछाको भाँडाको लागि एशियाई शैली चटनीको लागि अदरक र सोया सस संग मिश्रण गर्नुहोस्
सुगन्धमा अतिरिक्त प्रोटीन र एक सुक्ती लातका लागि मिक्स
स्वेरी नाश्ता को लागि मूंगफली मक्खन को बहाव संग शीर्ष नाश्ता अनाज या दलिया
सिरप, मक्खन, क्रीम पनीरको लागि भान्सा, टोस्ट, र प्याजको लागि मूंगफली मक्खन स्वैप गर्नुहोस्
किन दही? दही उत्कृष्ट स्रोत प्रदान गर्दछ:
भिटामिन डी, जुन तपाईंको शरीरले क्याल्शियम अवशोषित गर्न मद्दत गर्दछ
स्वस्थ जीवाणु (प्रोबायोटिक्स पनि भनिन्छ) जुन तपाईंको पाचन स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सक्छ।
दही हेक्स राम्रो स्वास्थ्यको लागि। दही प्रोटीन जोड्न वा उच्च फैटी फूड्स को बदलन को लागि महान छ।
ड्रेसिंग र डिप व्यञ्जनहरूमा खट्टा क्रीमको लागि सादा दही स्वैप गर्नुहोस्
सादा दही फल सुचारुमा, वा तहको साथमा फलफूल र क्रिस्टी मिठाई पर्फेफिटको लागि अनाज
मूंगफली मक्खन, मासुदार फल, वा स्वादको मसला राख्ने स्वादको साथमा दही दही मिलाउनुहोस्
अण्डाको सट्टा डुङ्गामा कोट चिकन वा माछा, र त्यसपछि कुचल अनाज मा र रोचक ओवन तलीको बर्तनको लागि बेक
सादा दही थोडा दूधको साथ मिश्रित स्वैप गर्नुहोस् जुन यसको लागि कल गर्ने व्यञ्जनहरूको लागि तितलीमा राख्नुहोस्
किन रस? WIC रस विकल्पहरू उत्कृष्ट स्रोत प्रदान गर्छन्:
भिटामिन सी, जुन तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली सुधार्न र घावबाट निको पार्न सक्छ। भिटामिन सीले तपाईंको शरीरलाई लोहा अवशोषित गर्न मद्दत गर्दछ र एक एंटीओक्सिडेंट हो जसले शरीरको केहि प्रकारको क्यान्सरबाट जोगाउँछ।
रस हेक्स राम्रो स्वास्थ्य को लागि। रस एक प्रकार को खाने को लागि एक स्वाभाविक रूप देखि मीठो स्वाद जोडने को लागि एक महान घटक हो।
सुन्तला रस को मिश्रण को लागि सलाद ड्रेसिंग को बाहिर स्वैप, एस्कोडोडो र सिलिलेरो
Smoothies मा आफ्नो रस को छनौट मिलाउनुहोस्।
चिकन मरिडेसहरू बनाउन सादा दही र जडीबुटीहरूसँग सानो जूस मिलाउनुहोस्।
कोट सेब, मीठो आलु, या गाजर, स्वादिष्ट शीशे को साथ फल या सब्जियों संग स्याउ या नारंगी को रस मा निविदा सम्म।
एक बराबरको दही र रस को मिश्रण र पेय पदार्थ दही स्नैक बनाउन सुचारु सम्म हलचल।